पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत जहाँ ॐ कार र डमरुको आवाज गुन्जिरहन्छ ! एकचाेटि पढेर सेयर गर्नुहाेला – Sawal Nepal
पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत जहाँ ॐ कार र डमरुको आवाज गुन्जिरहन्छ ! एकचाेटि पढेर सेयर गर्नुहाेला
७ माघ २०७६, मंगलवार १४:०९
कैलाश पर्वत समुद्री सतहदेखि २२ हजार ६८ फिट उचाईमा पर्छ । हिमालयको उत्तरी क्षेत्र स्थित तिब्बतमा रहेको छ यो हिमाल निकै मनोरम पनि छ । प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न धर्मको लागि यसको विशेष महत्व रहेको छ । यस स्थानको बारेमा लेखिएका विभिन्न मत तथा लोक कथाहरुको कारण पनि यसको महत्व अझ बढी छ । पौराणिक मान्यता अनुसार यस पर्वतमा केही रहस्यहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ-
आज हरितालिका तीज, यस्तो छ महिमा
नामको पहिलो अक्षरले नै बताउँछ मानिसको चरित्र र स्वभाव, तपाईको कस्तो हुनुहुन्छ ?